Shopp, WordPress ngwa mgbakwunye gị Ecommerce | ECommerce ozi ọma
Shopp bụ WordPress ngwa mgbakwunye nke na-arụ ọrụ dịka ngwa mgbakwunye dị mma maka e-commerce. Ọ bụ ngwa mgbakwunye echekwara nke ọma maka ebumnuche nke melite arụmọrụ nke Ecommerce gị, yana okporo ụzọ na-abata. Shopp nwere ike inyere gị aka mee ka ụlọ ahịa ịntanetị gị dị mfe ijikwa ma nwee nkasi obi maka ndị ọrụ gị na ndị ahịa gị.
Ngwa mgbakwunye maka Ecommerce Shopp
Ngwaọrụ a nwere ike ịbụ budata n'efu site na ntinye ngwa mgbakwunye WordPress na ozugbo awụnyere, ị nwere ohere a usu nke bara uru e-azụmahịa atụmatụ. N'ezie, ọ na-enye ohere webmasters hazie ụlọ ahịa ha n'ịntanetị n'okwu nke nkeji
Ekwesiri ighota na ọtụtụ aghụghọ na ndebiri dị iji mepụta ọkachamara maka ụlọ ahịa dị n'ịntanetị. Ihe mgbakwunye ahụ na-apụtakwa maka ịdị mfe nke ị nwere ike ịme ahịa, gbakwunye ngwaahịa ọhụrụ, melite ngwa ahịa, yana ịnye iwu.
N'adịghị ka azịza Ecommerce ndị ọzọ, Shopp na-enye gị ohere ijikwa akụkụ ọ bụla nke azụmahịa gị yabụ ị nwere ike ịmepụta aha ọrụ nhazi nke gị ma ọ bụ megharịa iwu site na usoro ọ bụla, na-emezu iwu na-akpaghị aka ma ọ bụ na-achịkwa onwe gị.
Ọbụghị naanị nke ahụ, yana Shopp ị nwere ikike ibupụ iwu na usoro nyocha dị ka QuickBooks, Intuit, ọbụna mpempe akwụkwọ na Microsoft Excel. N'ezie, Shopp nwere ike icheta ụbọchị mbupụ ikpeazụ iji mee ka ọ dị mfe ịme mbupụ na-aga n'ihu na mgbe niile.
Ihe mgbakwunye ahụ na-enyekwa ọtụtụ nhọrọ nchekwa iji gbochie ndị na-eme ihe ọjọọ ma bulie ahụmịhe ndị ahịa mgbe ị na-eme nchọgharị ma na-azụta na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Na mgbakwunye, enwere aha ndebiri ike na-enye gị ohere ịmepụta ọtụtụ mpempe akwụkwọ ọhụụ dị ka achọrọ iji rụọ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Shopp, WordPress ngwa mgbakwunye gị Ecommerce
Etu ị ga-esi họrọ Okwu ma ọ bụ ndebiri maka saịtị Ecommerce gị